Koox hubeysan oo dil iyo dhaawac ka geystay Degmadda Afgooye - Awdinle Online
Koox hubeysan oo dil iyo dhaawac ka geystay Degmadda Afgooye
February 10, 2020 (Awdinle Online) – Gobalka Shabeelaha Hoose ee koonfurta Soomaaliya ayaa la sheegaya in xalay rag hubeysan oo burcad ah ay dad shacab ahaa dil iyo dhaawac ugu geysteen duleedka degmada Afgooye.
Kooxdan oo ku hubeysnaa qoryaha fu-fudud ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen dad beeraley ah oo ku sugnaa halkaasi, iyaga oo isugu daray dil, dhaawac iyo dhac intaba.
Dadka deegaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay in dableydaasi ay dishay nin lagu magacaabi jiray, Cumar Nuur oo ka mid ahaa dadka beeraha ku leh duleedka Afgooye.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ky daraya in kooxdii burcada aheyd falka kadib ay goobta isaga baxsatay, waxaana markii dambe meesha gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga Afgooye oo baaritaano dheeraad ah ka sameeyey duleedka degmadaasi.
Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxaa inta badan ka dhaca dhibaatooyin kala duwan oo ay geystaan kooxo burcad ah oo ku sugan qeybo ka mid ah gobolkaasi, sidoo kale waxaa u sii dheer weerarada dagaalyahannada Xarakada Al-Shabaab iyo dagaallada ay kala kulmaan ciidanka Xoogga Soomaaliyeed.
Previous articleXildhibaan Ka tirsan barlamaanka Kenya “Madoobe ma ahan Kenya..”
Next articleMaamulka Buule Burte oo ka dayriyey shaqada Garoonka diyaaradaha Buuloburde!